कहिले हुन्छ जातीय विवेदको अन्त्य – Daunne News
कहिले हुन्छ जातीय विवेदको अन्त्य
By Daunne News	 On भाद्र १२, २०:५४
चियापसलमा चिया खाँदै थिए। कुनै सुन्दर अनुहार परेकी एक जना किशोरी त्यही बाटो भएर गइन। निकै सुशिल शालिन आँखा थियो उनको। मैले देखे उनी साच्चिकै राम्री थिइन। त्यही पसलमा चिया पिउँदै गरेको एक जना गैरदलित पुरुषले प्वाक्कै भन्यो “कामी भएर पनि बाहुनी जस्ती छ यार त्यो केटी त ?” अरे बावा सुन्दर हुनु जातको के दोष ? त्यही अर्को केटाले भन्यो धत यार तल्लो जात भएर हो नत्र उडाइदिन्थे। अर्को केटाले उत्ताउलिएर भन्यो एक रातको लागि मिलाई दे न यार। त्यहाँ लगातार हाँसोको लहर फैलिएको थियो। के त्यसो भए सुन्दर हुनु, शुशिल हुनु र दलित हुनुमा उनको दोष हो र ?त्यसो भए दतिलकी छोरीहरुले सुन्दरी हुदा उनीहरुको गैरदलितको छोराहरु प्रतिष्पर्दाको लागि सुन्दर भएका हुन र? यी रहे फजुलमा दलित महिला माथिको मजाक। राम्रा र शुसिल हुनुमा पाएको उपहार।
विद्यालयको गेटमा छिर्ना साथ लाग्थ्यो सबैभन्दा भेदभाव रहित समाज यही हो । सबैले बोक्ने किताब एउटै हुने । सबैले लगाउने पोषाक एकै हुने । डेक्सबेञ्च पनि एउटै हुने । सबै भन्दा मज्जाको बिषय त त्यो थियो । जस्ले कितावको अक्षरहरु र त्यसले दिने ज्ञान एकै हुनु । हत्तेरी कति सहज भाषामा विद्यालय भनिएको हो । म सोचिरहेको छु । जीवनको पाठशालामा पनि यति मैत्री बाताबरण हुन्छ र ? मैले जीवन भोगाईका ज्ञानशालामा कहि पनि त्यति असहज होला भन्ने सोचेकै थिइन । शायद यो नसोच्नुले पनि निकै हण्डर खानु पर्ने रहेछ । यति बेला मैले भेदभाव भनेर धनी गरिब बीचको उचाईको बारेमा कुरा गरेको छैन । मैले त बर्षौ पुरानो समाजमा बिद्यमान रहेको जातीयता र सम्बन्धको कुरा उठान गर्न खोजीरहेको छु ।
जातीयताको निकै कमजोर खाल्डोमा रुमलिएको कथित गैरदलित र दलित बीचको प्रेम सम्बन्धको कुरा थाती राखेर मैले दलित महिला र गैर दलितबीचको सम्बन्धको पर्खालको बिषयमा उठान गर्न खाजिरहेको छु । कति ठाउँमा यो बिषय उठान गर्दा जातीवादी भन्ने आरोप पनि आउँछ । तर मैले जातीयता र यस्को मारमा परेको दलित महिला पुरुषको बारेमा लेख्नै पर्छ भन्ने हेतुले पनि लेख्दै छु । केही बर्ष अगाडिदेखि हामीले देखिरहेका छौ पहिचानको मुद्वा जातीयताको बारेमा सधन सडकमा बहसको बिषय बनेको छ । पहिचानकै आधारमा आरक्षणका कोटा पनि वितरण गरिएकै छ । तर बास्तविक दलितहरुले यो सेवा सुबिधा पक्कै पाएको होला या पाएता पनि कोटामा परेकै आधारमा तिनीहरुलाई हेरिने नजरिया उस्तै होला त ? अहँ छैन पक्कै पनि ।
क्याम्पसको लेक्चर जस्ले समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको बिषयमा अध्यापन गराउछ उस्ले उपाध्य बाहुन भएकै कारण गर्व गरेर दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्न सक्छ भने अन्य बिषयमा कति उपेक्षित हुन्छ होला त भन्न सकिने अवस्था छैन । मास्टरकै क्लासमा कुनै शिक्षकले दलित स्टाफको बिहे भोजमा जाँदा दलितले पकाएको खाना खान पर्छ भनेर खाममा पैसा हालेर निस्किएको कुराले हामीले बझ्ने कुरा के होला बौद्धिकताको सबै तह पार गरेकोहरुको अवस्था त यस्तो छ अब सोच्नु अरुको हालत के होला? साच्चै यसो सोच्नु त यी दुबै बिचमा हुने अन्तर के हो ? बौद्धिकता हो या कुप्रथा। प्रथाकै कुरा गर्ने हो भने पढे लेख्या मान्छेहरु यो मान्दैनन्। तर अचम्म त यति बेला लागिरहेको छ ।
गैरदलित र दलितबीचको सम्बन्ध जहिले पनि एक आकास पतालको फरक छ । मैले कुनै फेन्सी पसल गरेकी महिलाले आफ्नै पसलमा छोरीलाई फेसन डिजाइन पढ्न जीत गरेकी उसकी छारीलाई यो त दलितले गर्ने काम भनेर बताउँदा अचम्म मान्न पर्ने कुनै कारण हुने छैन किन भने दलित भनिनु र तिनीहरुको पेशाको काम बीच हुने अन्तर भनेको उनीहरुको सोच हो । केही महिना आगाडि गायक प्रकाश सपुतको गल्बन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर, बोलाउन नखोज सोझी ठानेर भन्ने गीत बजारमा आयो । त्यस्ले बजारमा रातारात तहल्का मच्चाएको थिया त्यस्को चर्चा र परिचर्चा मात्र फैलिएको बेला लय चोरी भो भनेर दलितकै उपहास गरेको थिए ? दलित भएर सानो सोच भएकै कारण लय चारी भएको भनेर पुरा दलितहरुलाई नै अपमानित गरेको थिए । के नेपाल सरकारले र नेपालको संविधानले दलितहरु नागरिक नै होइन भनेर उल्लेख गरेको छ । खोइ त कानुन खोई दलितलाई कानुन ? जो त्यसरी बोलेको थिए, तिनीहरुलाई कारवाही नी भएन । हो लय चोरी भएको भए कानुनी रुपमा कारवाहीको कदम चाल्नुपदैन थियो र? गैर दलितहरुको अनुहार राम्रो भएन भने छि कस्ति ….. जात जस्ति भनेर खिल्ली उडाउछन र दलितहरुको राम्रो अनुहार हुने हो भने तिनीहरु ठुला जात जस्ति भनेर भन्नु मानव माथि मानवको शोषण होइन र ? नेपालको कानुन पनि ऐनाको पैसा जस्तै हो । गन्दा हुने छाम्दा नहुने ।
चियापसलमा चिया खाँदै थिए । कुनै सुन्दर अनुहार परेकी एक जना किशोरी त्यही बाटो भएर गइन । निकै सुशिल शालिन आँखा थियो उनको । मैले देखे उनी साच्चिकै राम्री थिइन । त्यही पसलमा चिया पिउँदै गरेको एक जना गैरदलित पुरुषले प्वाक्कै भन्यो “कामी भएर पनि बाहुनी जस्ती छ यार त्यो केटी त ?” अरे बावा सुन्दर हुनु जातको के दोष ? त्यही अर्को केटाले भन्यो धत यार तल्लो जात भएर हो नत्र उडाइदिन्थे । अर्को केटाले उत्ताउलिएर भन्यो एक रातको लागि मिलाई दे न यार। त्यहाँ लगातार हाँसोको लहर फैलिएको थियो । के त्यसो भए सुन्दर हुनु, शुशिल हुनु र दलित हुनुमा उनको दोष हो र? त्यसो भए दतिलकी छोरीहरुले सुन्दरी हुदा उनीहरुको गैरदलितको छोराहरु प्रतिष्पर्दाको लागि सुन्दर भएका हुन र? यी रहे फजुलमा दलित महिला माथिको मजाक। राम्रा र शुसिल हुनुमा पाएको उपहार।
के त्यसो भए दलित महिलाहरु र गैरदलितहरुको बीचमा हुने अन्तर भनेको पानी र विवाहमा मात्र अलग हो कि शारीरिक सम्भोग मात्र सम्भव हुने हो। दतिल समुदायको गैरदलितको बीचमा कम्मर भन्दा तल चल्ने त्यो भन्दा माथि नचल्ने हो । बर्षौसम्म प्रेम गरेर भागेका प्रेमीहरुको लागि दिशा खुलाइनुले नेपालको बौद्धिक स्तर कस्तो छ होला अच्चम मान्न पर्दैन होला । यति बेला हामीले बाचेको समाजको बारेमा लेख्दा पनि लाज लाग्छ । जस्तो समाज छ त्यस्तै भाषा लेख्दा शायद अनुशासनको कुरा उठ्लान ? केही जातियवादीहरुले ठिकै भन्लान तर जातीयताको मारमा परेर सयौ परिवारहरु बिर्गेका कुरा उठान गर्नु भने गल्ती होइन शायद । विज्ञानले प्राणीहरुको जगतमा सबै भन्दा श्रेष्ठ मान्छे हो भनेर विभाजन गरेको छ । मान्छेको यो वर्ग मुख्य र त्यो वर्ग फरक भनेर कही पनि विभाजन गरेको छैन । विज्ञान पढ्ने एक जना शिक्षकले जात कै कारण विवाहमा पछि हट्न सक्छ। किनभने उस्को मानसिकता भनेको यही संकिर्ण समाजले थोपारेको कुरितिले भरिएको हुन्छ । विज्ञानले मान्छेलाई मान्छेको जात मान्छे नै हुन्छ भनेर भनेको छ न कि दलित र गैर दलित भनेर विभाजन गरेको छैन् । धर्मशास्त्रको केही पानाहरुमा जातियताको बारेमा लेखिएको होला तर के धर्म भनेको सानो जातसंगको शारीरक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने तर विवाह जस्तो कुरालाई मात्र नकार्ने विषय हो त ? दलित महिलाको रुप रंग र उस्को शरीरको भोग मात्र चल्ने समाज नै नेपाली समाज हो । कुलको कुरा, इज्जतको कुरा गर्नेहरुले दलितको कुलै नहुने कुरा गर्न भ्याउछन् । त्यसो भए दलितहरु मान्छे नै होइन त ? गैरदलितहरु र दलितहरुको शारीर सम्भोगबाट अर्कै चिज जन्मन पर्ने होइन र? त्यसो भए के धर्मशास्त्रले गैरदलितहरुको मात्र कुल हुने कुरालाई मान्छ त? केही मान्छेहरु बर्षौ सम्म एक जना गैरदलितसंगको प्रेमलाई पवित्र मानेर उस्को घर न बास गर्न सक्छन् त्यसलाई सुनपानी छरेर चोखो बनाउन मिल्ने तर दलितहरु सुनै सुन बनाएर त्यही सुन पगालेर नुहाए पनि दलितै रहने हो त ? के सुनारहरुले बनाएको सानो कलात्मक सामानले गैदलित पुन ब्रह्माण बन्न सक्छ भने त्यहि सुनार किन बन्दैन चोखो ? मन्दिरमा राखिएको सुनकै मुर्ति किन नहोस ति पनि दलित नै बनाउछ, त्यस्ले गैरदलितको मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वास छ भने दलित किन समान छैन त?
नेपालमा ५८÷५९ सालमा भएको कति विवाहहरु दलित र गैर दलित भएकै कारण सम्वन्ध बिच्छेद भएको छ । त्यति बेलाको भुिमगतमा हुँदा मरिन्छ कि बाँचिन्छ भनेर विवाह गर्थै तर पछि तिनीहरुले नै जातीयताको समाजको डरले विवाह रद्ध गरेको छन् । पाटीले स्वीकृति दिएर गरेको विवाहलाई प्रगतिशिल विवाह भनेर उपमा दिन्थे । खोई त्यति बेलाको विवाहलाई सरकारमा गएर प्रचण्डले निरन्तरता दिएको ? प्रोत्साहन भनेर पैसा दिदैमा विवाह सम्भव हुदैन । यहाँ प्रेम गरेकै आधारमा दलितहरुलाई गैरदलितहरुले मर्ने गरि पिट्छन । गैर दलितको छोरी दलितसंग भागि भने ल्याएर पुन विवाह गर्ने र केटालाई मार्ने धम्कि दिएर मानशिक रुपमा पागल जस्तै गराउछन् । केही बर्ष पहिला कावासोती बजार भन्दा १ किलोमिटर पश्चिमको एक दलित राहुल (नाम परिवर्तन) ले कुनै गैर दलितको छोरी भगायो । एक महिनासम्म कतै लुकेर बसे त्यसपछि घरमा आए । आएको केही घण्टा मै उस्लाई घरमै आएर पिटे । केटीलाई लिएर गए । तिनीहरु बीचको प्रेम र विवाहलाई स्वीकार गरेर तिनीहरुको के जान्थ्यो । अर्कै त्यस्तै घटना छ गैरदलितकी छोरी एक जना मुस्लिम धर्मावालम्वीसंग भागि भनेर मृत्यु सस्कार गरेको थिए । के मान्छेहरु यति सम्मको सोच्न सक्छन् । केही महिना अगाडि स्याङ्जामा एउटा नेवारको छोरीको विवाह एक जना दलितसंग गराएको थिए त्यसलाई प्रंससा गर्नेहरु भन्दा आलोचना गर्नेहरु बढी थिए । त्यस्तै राम्रो काम गर्नेहरुले सम्पत्ति माथिको कुरा उठान गरेको थिए । दलित भएकै कारण जागिरमा मुख्य पदमा राख्न नहुने मानशिकता बेकेको यो समाजको कुरा त गरि सक्नु छैन् ।
अहिले पछिल्लो पटक बैदेशिक रोजगारमा गएको कति महिलाहरु घरयासी काममा जान्छन । भाडा माझेर बचेको खाना खाएर दुख पाएर फक्रेकाहरुले अझै पनि मान्छेहरु को जात एउटै हो । संसारभरको मान्छेको हैसियत एउटै हो भन्ने स्वीकार्न सक्दैनन । भगवान न जात छ न कुल तर त्यो भगवान पनि दलितहरुको लागि साझा हुदैन रे ? दलित घर भित्र जाँदा तिनीहरुको कुल रिसाएर बंश नासिन्छ रे ? त्यसो भए दलितहरुलाई छुट्टै जात हो यिनीहरु मानव नै होइन भनेर प्रमाण गर्नु पर्ने होइन् र ? मान्छेहरुले किन भेदभाव गर्छन ? भेदभाव गर्नु मानविय अपराध हो । दलितहरुको सोच सानो हुन्छ भन्ने गैरदलित नै होइन र विभेद समाज बनाछु भन्नेहरु कहाँ छौ ? के तिमीहरु लाखौ दलितहरुलाई समान गराउने विभार गरेर सत्तामा गएका होइन । ति सत्ताधारीहरु बोल्दा विभार पु¥यायनु पर्दैन र ? समाज एउटै काटे रगत एउतै देश एउटै तर विभेद किन ?